TAFATAFA MIARAKA AMIN'I :: “Maro ireo tanjona fa mila fiomanana ara-bola” • AoRaha
TAFATAFA MIARAKA AMIN’I “Maro ireo tanjona fa mila fiomanana ara-bola”
*Nanao ahoana ny taona 2018 ho an’ny rugby malagasy?
-Tsara ny vokatra satria nahavita fampiofanana mpampianatra maro sy “tournoi scolaire” ho an’ireo faritra 18 aty nisy ihany koa ny fifaninanana ho an’ireo “Ecole de rugby”. Tafiditra ao anatin’ny valo voalohany maneran-tany i Madagasikara raha eo amin’ny fampiofanana mpanazatra, mpanomana ara-batana, mpitsara ary ireo mpitsabo ara-patanjahantena. Teto an-toerana, vita ny “Gold Top 20” na dia maro ireo sakantsakana indrindra ny pôlitika ka tsy nahazoanay kianja hilalaovana izany, mbola miandry kosa anefa ny fifaninanam-pirenena ho an’ireo
tompondaka isam-paritra (1ère Division régionale) sy ny sokajy U20 ary ny vehivavy.
*Ary nanao ahoana ny teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ?
-Maro ireo vokatra tsy nahafa-po na teo amin’ny “Rugby à XV senior” sy U20 na teo amin’ny “Rugby à VII” lahy sy vavy, indrindra teo amin’ny sehatra afrikanina. Na izany aza dia nisy ezaka be nataon’ny Malagasy Rugby satria maro be ny ekipam-pirenena nandranto lalao tany ivelany tamin’ity. Ny “U20 à XV”, “Senior à XV” sady nanao tamin ‘ny Oxford University izay fifaninanana eny amin’ny oniversite tany Angletera taona 2018 ity no mbola fahasivy aty Afrika. Ny “rugby à VII” vehivavy tompondakan’ny ranomasimbe Indianina ary fahefatra aty Afrika. Ny “U18 à VII” vehivavy dia voahosotra tompondaka lefitr’i Afrika ihany koa tany Algérie, ary ny “Rugby à VII” lehilahy fahefatra aty Afrika.
*Inona no dikan’ireo vokatra ireo ho an’ny Malagasy Rugby ary inona no lamina asa amin’ny 2019?
-Ireo vokatra ireo amin’ny ankapobeny dia midika fa mandroso araka isa isika, fa saingy mbola tsy misy fiantraikany any amin’ny ekipam-pirenena izany. Noho izany dia ireto avy ny vaindohan-draharaha ho an’ny taona 2019. Hampitombo ireo sekoly handray anjara amin’ny fifaninanana ara-panatanjahantena an-tsekoly. Hanabe sy hampiofana ankizy ao anatin’ny ivon-toeram-piofanana ( 12 lahy U16 ary 12 vavy U18 mandritra ny 3 taona). Hampiofana ireo “cadres” indrindra ny “niveau 2”. Hikarakara fifaninanam-pirenena ho an’ny sokajy 1ère Division Fédérale, 1ère Division régionale ary U20 sy vehivavy raha eo amin’ny Rugby à XV.
*Ary ny inona no azo resahina eo amin’ny Rugby à VII?
-Zava-dehibe ny fanaovana fifaninanana “Rugby à VII” mba hananantsika traikefa satria io no tsy ampy any amin’ny lalao iraisam-pirenena. Hanomana ireo ekipam-pirenena indrindra ny “Rugby à VII” isika satria hiatrika fifanintsanana amin’ny Lalao Olympika izay hatao any Japon amin’ny 2020 isika amin’ny 2019. Mafimafy ny vola holaniana amin’ireo raha ny ara-teknika satria tafakatra 650 tapitrisa ariary izany ka ilàna fanampiana maro raha te handresy isika. Marihiko fa anisan’ny zava-baovao ny fakàna mpilalao mila ravinahitra tamin’ity 2018 ity ka mila hatsaraina ny fifandraisana fa tany no hita ho lesoka. Mbola hanao ezaka be isika eo amin’ny lafiny fanohanana ara-bàtana ihany koa satria ny talenta sy ny teknika dia feno dia feno.
TENISY AMBONY LATABATRA – “OPEN DE TANA” :: Narodan’i Nicky sy Rojo ny tompon’ny amboara farany
«TRAIL DE LA LIBERTE» :: Nahavita pao-droa tany La Réunion ny atleta malagasy